Astaamaha Paul Rogé
Machadka McKnight wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo in Paul Rogé uu u adeegi doono sarkaalka sare ee barnaamijka barnaamijka caalamiga ah. Rogé wuxuu keenaa khibrad 20 sano ah oo ku saabsan cilmi baarista cilmiga beeraha iyo iskaashiga beeraleyda sagaal dal oo ku kala yaal afar qaaradood. Wuxuu bilaabi doonaa shaqadiisa cusub bisha Luulyo.
Sarkaalka sare ee barnaamijka, Rogé wuxuu hogaamin doonaa oo hormarin doonaa cilmi baarista cilmiga nafsiga ee Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada, kaas oo la shaqeeya beeraleyda yaryar, hay'adaha cilmi baarista, iyo ururada horumarinta si loo hagaajiyo helitaanka degaanka, waarta, nafaqada leh loona abuuro nidaam cunno caalami ah oo cadaalad ah. Kooxda Caalamiga ah waxaa ka mid ah agaasimaha barnaamijka Jane Maland Cady, PhD, sarkaalka barnaamijka Megan Powers, maamulaha kooxda barnaamijka Kelsey Johnson, iyo koox la-hawlgalayaal la-talin ah oo taageera barnaamijka Wadajirka ah ee Cilmi-baarista Dalagga ee ka socda 10 dal.
Waxaan si aad ah ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno Paul waxaanan ku qanacsanahay inuu u keeni doono aragtidiisa iyo khibradiisa kooxdeena maaddaama aan la shaqeyneyno wada-hawlgalayaasha adduunka oo dhan si aan u taageerno cilmi-baarista cilmiga beeraha iyo beeraleyda ee wax ka qabta helitaanka cuntada, isbedelka cimilada, iyo sinnaanta adduunka ”Ayuu yidhi Maland Cady. “Waxaan si qoto dheer u aaminsanahay in cilaaqaadka adag ay yihiin kuwa keena horumarka shaqadeena. Khibradda Bawlos waxay la jaanqaadaysaa himiladeenna iyo himiladeenna, iyo wadashaqeyntiisa, habka beeraleyda diiradda loogu saaray waxay faa'iido u tahay McKnight maaddaama aan sii wadno horumarinta howshan muhiimka ah. ”
Rogé wuxuu haystaa shahaadada PhD ee cilmiga deegaanka, siyaasada, iyo maamulka ee jaamacada California, Berkeley. Wuxuu ku hadlaa afar luqadood. Marka lagu daro luqadihiisii ugu horreeyay ee Ingiriisiga iyo Faransiiska, wuxuu ku fiicnaaday Isbaanishka iyo Boortaqiiska cilmi baarista takhasuska ee Mexico iyo laba sano oo uu deggenaa Brazil.
Xirfad Ku Saabsan Wada Shaqeynta, Cilmibaaris Wadaagyo Badan
Kahor intuusan ku biirin McKnight, Rogé wuxuu ahaa borofisar iyo lataliyaha cilmi baarista ee kulleejada Merritt ee Oakland, CA, halkaas oo uu ku baray koorsooyin ku saabsan agroecology-ga magaalooyinka. Intaa waxaa dheer, Rogé wuxuu u adeegay kuxigeenka guddiga manhajka kulliyadda. Shaqadiisa Merritt waxay maalgelisay laba iskaashi, midna barnaamijyada 4H ee gobolka si loo bilaabo akadeemiyada xagaaga ee hoggaaminta dhalinyarada iyo tan kale oo aan faa'iido doon ahayn oo maxalli ah si loo abuuro barnaamijka tababarka beeralayda deegaanka.
Rogé waxaa ka go'an dhismaha kooxda iyo wada shaqeynta. Wuxuu ku guuleystey hogaaminta cilmi baarista u adeegta kooxaha daneeyayaasha oo ay ku jiraan beeraleyda, bulshada rayidka ah, iyo siyaasad dejiyeyaasha. Shaqadiisii dhakhtarnimo ee Oaxaca, Mexico, wuxuu ku sameeyay cilmi baaris ka qaybqaadasho ah oo udub dhexaad u ahayd beeralayda wuxuuna adeegsaday habab cimilo-nafsiyeed kala-duwan. Shaqadiisii dhakhtarnimada kadib ee Malawi wuxuu qiimeeyay suurtagalnimada dalagyada cunnada ee caadiga ah. Wuxuu sidoo kale daba-galay dadaallo uu isugu keenayo beeralayda yar-yar ee Kalifoorniya iyo cilmi-baarayaasha si ay si fiican u fahmaan sida nidaamyada beerashada kala duwan ay saameyn ugu yeeshaan caafimaadka ciidda. In ka badan 20 sano, Rogé wuxuu xooga saaray cilmi baaris iskaashi oo lala yeeshay beeralayda, khibrada uu rajeynayo inuu la wadaago McKnight iyo la-hawlgalayaasheeda caalamiga ah.
Waxqabadyadiisa kale ee xirfadeed waxaa ka mid ah u adeegida xubin ka mid ah guddiga Agroecology Commons, Guerrilla Cartography, Iskuulka Cusub ee Iskaashatada ee Daraasaadka Magaalada iyo Cadaaladda Deegaanka, iyo Dahabka 'Golden Gate Cohousing'. Wuxuu keenaa faham qoto dheer oo ku saabsan horumarinta barnaamijka iyo khibrad u leh falanqaynta xogta iyo qiimeynta.